Dowladda Soomaaliya oo deeq waxbarasho u qaybisay ardayda Soomaalida ah ee ku jira xeryaha Yeman – Radio Daljir
Agoosto 10, 2013 3:05 b 0
Sanca, Aug 10, 2013 – Qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool dalka Yeman ayaa si diiran u soo dhoweeyey talaabo ay dowladda Soomaaliya uga qeyb gelisay deeq waxbarasho oo ay dowladda Yeman siisay arday Soomaaliyeed.
20 ka mid ah ardayda qaxootiga Soomaalida ah ayaa la siiyey deeq waxbarasho, taasi oo ay dowladda Soomaaliya sanadkan ka heshay xukuumada Yeman, waxaana arrintaani ay tahay talaabo cusub oo aan horey loo baran.
Qunsulka guud ee safaarada Soomaalida ee Cadan mudane Axmed Cali Xasan (Suudaani) ayaa shaaciyey in ay booqdeen goobaha ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ah ee dalkaasi, qunsulku wuxuu sheegay in ay si wanaagsan ugu qanacsan yihiin dadku arrintaani.
Howlaha qabashada codsiyada ardayda ay gudbisteen ayaa haatan ka socda safaarada Soomaalida ee Yeman, qunsulka oo arintaasi ka hadlay wuxuu sheegay in ay ku dadaali doonaan in ay soo xulaanyaan arday tayo leh, isla markaasna ay qaadi doonaan Imtixaanka.
Deeqaha waxbarasho ee dowladda Soomaaliya ayaa horey ugu koobnaa gudaha dalka oo ardayda laga qaadi jiray, Qunsuliyada Soomaalida ee Yeman waxay sheegeen in ay tahay markii ugu horeysay taallabadan oo kale la qaado.